विमानमै यात्रुको मृत्युपछि उडेको तीन घन्टापछि फर्कियो एयर इन्डियाको जहाज ! - jagritikhabar.com
विमानमै यात्रुको मृत्युपछि उडेको तीन घन्टापछि फर्कियो एयर इन्डियाको जहाज !
भारतको नयाँ दिल्लीबाट अमेरिकाको नेवार्क सहरका लागि उडेको विमान पुन: नयाँ दिल्ली फर्किएको छ ।
विमानस्थल अवतरणपछि चिकित्सकहरुको एउटा समूह विमानभित्र विरामीको परीक्षण गरेको थियो । समूहले तत्कालै विरामीलाई मृत घोषित गरेको थियो । मृत भएका व्यक्ति अमेरिकी नागरिक रहेको जनाइएको छ ।
शवलाई सोही विमानमार्फत अमेरिका पठाइएको छ ।